Xiriirka Turkiga iyo Maraykanka oo Meeshii Ugu Xumeen Taagan [FALANQEYN] | SAHAN ONLINE
Xiriirka Turkiga iyo Maraykanka oo Meeshii Ugu Xumeen Taagan [FALANQEYN]
Xiriirka ka dhexeeyay Turkiga iyo Mareykanka ayaa labadii sano ee ugu danbeysay sii xumaaday. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha imminka haya talada dalka Mareykanka Donald Trump waxaa soo ifbaxayay kala fogaansho iyo isku dhac xagga danaha labada dal ah. Mareykanku wuxuu muddo taageerayay jabhadda Kurdishka ee u dirirta gooni isku taaga dadka Kurdida—kuwaas oo dagaal hubeysan kula jira dawladda Turkiya. Xiriirka labada dal wuxuu aad usii xumaaday 2 sanadood ka hor kadib markii koox katirsan ciidanka qalabka sida ee Turkiga oo daacad u ah wadaadka musaafurinta iyo magangelyada ugu nool dalka Mareykanka Fatxullaahi Guulan ey isku dayeen afgambi ey afgambinayaan madaxweyne Erdogaan iyo xukuumaddiisa. Turkida waxay codsatay in wadaadka Guulan lagu soo wareejiyo si maxkamad ugu saaraan dalka Turkiga, Mareykanka wuu ku gacan seyray arrinkaas.
Xilligii la qabqabanayay dadkii ka danbeeyay afgambigii 2016kii ee dhicisoobay, dadkii loosoo qabqabtay waxaa ku jiray wadaad Krishtaan ah oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Mareykanka. Wadaadkaan oo lagu magacaabo pastor Andrew Brunson. Brunson waa lasoo xiray isagoo lagu eedeeyay basaasnimo iyo inuu gacan siinayay kooxaha argagixisada ah. Muddo ayey dawladda Mareykanka daaha gadaashiisha ka daba wareeganeysay in lasii daayo wadaadkaan Brunson, laakiin dawladda Turkiga ayaa ku dhaganaatay go’aankeeda. Haddii wadaadkaan lagu helo danbiyada lagu eedeeyay wuxuu xabsiga ku jirayaa ugu yaraan 35 sanadood. Mareykanka waxay isku dayeyn in Turkidu ey wadaadka Brunson sii dayso, kuna bedelato gabadh Turki ah oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha taas oo Israaiil ku xirneyd. Gabadha waxaa lagu magacaabaa Ebru Özkan. Ugu danbeyntii Turkida waxay xabsiga kasoo saareen wadaadka Brunson, waxayna geliyeen xabsi guri inta laga gaarayo maxkamaddiisa. Laakiin, talaabadaan Mareykanku masoo dhoweyn ee wuxuu doonayay in wadaadka diyaarad loosoo saaro.
Mareykanku markuu ka quustay in si hoose wadaadka loosoo daayo, wuxuu madaxweynaha Mareykanka iyo ku xigeenkiisaba bilaabeen iney hanjabaad Turkiga warbaahinta usoo dhigaan—gaar ahaan baraha bulshada twitter. Taasi markey socon weyday oo Turkigu uu go’aankiisa ku adkeystay, wuxuu Trump bilaabay inuu cunuqabateyn ku hanjabo. Si kastaba ha ahaatee, Turkiga waa xubin muhiim ah oo katirsan gaashaanbuurta NATO, Mareykankana waa ku dhici waayay inuu si toos ah cunaqabateyn Turkiga ugu soo rogo. Taa beddelkeeda Mareykanka waxay Turkiga kusoo rogay canshuur xad dhaaf ah badeecada Turkigu u iib geeyo dalka Mareykanka. Sanadkii lasoo dhaafay Turkigu wuxuu Mareykanka u dhoofiyay bir (steel) qiimaheeda lagu qiyaasay $1.5 Bilyan oo dollar, iyo allamiiniyam (aluminium) gaareysa $60 Milyan oo dollar. Canshuurta Mareykanku uu kusoo rogay badeecada Turkiga ayaa ah mid laba-jibaaran 20% canshuur ah oo la dul saaray allamiiniyamka (aluminium) iyo 50% canshuur ah oo la dul dhigay birta (steel).
Maanta ayey aheyd markii Turkiga oo ka jawaabaya talaabada canshuurta Mareykanka ayaa dadkiisa ku amray iney dollarka iyo dahabka ey heystaan ku bedeshaan Liirada Turkiga si doolaarku uu suuqa uga baxo, qiimihiisana uu u dhaco. Sidoo kale, Erdogaan oo ka jawaabaya canshuurta xad dhaafka ah ee Mareykanku kusoo rogay badeecada Turkiga ayaa maanta khadka teleefoonka in muddo ah kula sheekeysanayay dhiggiisa dalka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin—taas oo Mareykanka ka careysiisay. Lama yaqaan cidda qaadi doonta talaabada xigta iyo waxa ey noqon doonto toona. Malaga yaaba Mareykanka oo ah waddanka deeqaha ugu badan siiya dalka Soomaaliya inuu dawladda federaalka ee madaxweynaheedu uu heysto baasaboor Mareykan ah ku amro in Turkiga laga cayriyo Soomaaliya, xiriirkana loo jaro?
Iskusoo wada xooriyoo, sidaan kor kusoo xusnay, Turkigu waa xubin muhiim ah oo katirsan gaashaanbuurta NATO. Sidoo kale, Turkigu wuxuu dhacaa dhul istiraatiiji ah oo ah meesha ey isaga darsamaan labada qaaradood ee Yurub iyo Aasiya. Kudarso, Turkigu wuxuu xuduud la leeyahay laba dal oo colaad toos ah kula jira dalka Mareykanka waa Iiraan iyo Suuriya. Wadamada Yurub ma ogola mana soo dhoweynayaan in Turkida laga xanaajiyo, waayo Turkigu wuxuu hayaa in ka badan 3 milyan oo qaxooti Suuriyaan ah—oo hadduu oodda kasoo qaado waxay soo galayaan Yurub, waxaan suuragal ah in malaayiin kale oo qaxooti ah ey Turkiga soo maraan. Sidoo kale, Mareykanka ma weerari karo Iiraan hadduusan xiriir wanaagsan la laheyn Turkida, oo wuxuu u baahan yahay inuu dulmaro hawada Turkiga.
Khuburada siyaasadda caalamiga ayaa is-tuuryeynta labadaan dal ku tilmaamay mid aan u adeegeyn danaha xulufada NATO, oo haddii Mareykanku uu joojin waayo baacsiga uu ku haayo Turkida ey suuragal tahay iney ku biiraan xulufada Ruushka iyo Shiinaha (BRICS) kuwaas oo loolan weyn ku haya xulufada uu horboodayo Mareykanka. Intaas kali ah ku ekaan meysee, waxay khubaradaan qabaan in haddii uu Turkigu goosto oo u galo xulufada BRICS uu la tagi doono sir badan iyo khibrad badan oo uu ka hayo xulufada NATO. Midowga reer Yurub ayaa isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo labada dal, sababtoo ah colaadda labada dal cidda ey dhibta ugu badan soo gaareyso—oo dhexda degani waa reer Yurub. Bal waa eegnaa waxa soo kordha.
W/Q: Cabdicasiis Carab